Ukuya eAfrika? Faka iZambia
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo » Ukuya eAfrika? Faka iZambia
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • inkcubeko • iindaba • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zaseZambia eziQhekezayo
Ezokhenketho ziba yinjini yoqoqosho ebalulekileyo eZambia, idala ingqesho, ivuselela iziseko zophuhliso kunye nokunyusa umvuzo wangaphandle.
Kubakhenkethi bamazwe aphesheya abangama-53.3 ezigidi abatyelele iAfrika ngo-2014 kuphela yi-1.7 yepesenti abatyelele iZambia. Injongo yotyelelo yayiyeyona nto iphambili kushishino (iipesenti ezingama-54) inepesenti ezingama-25 kuphela yokubhukisha iholide. Ngelixa uninzi lweendwendwe lwalusuka eAfrika, kwakukho abakhenkethi abasuka eYurophu (iipesenti eziyi-9.5), iAsia (iipesenti ezisi-7.7), amaMerika (ama-5.3 ekhulwini), ne-Australia (iipesenti eziyi-1.3).
IZambia inobutyebi obuninzi bamathuba okhenketho lwezendalo ukuze ndibone kubandakanya iipaki zesizwe ezili-19 kunye neKafue eyona inkulu kwaye inomtsalane yiVictoria Falls. Abandwendweli abanomdla wokubona iiNgxangxasi kodwa benqabile ukuhlangabezana nezidubedube zezopolitiko kwicala laseZimbabwe, bakhethe ukujolisa eZambia.
Ukhenketho luba yinjini yoqoqosho ebalulekileyo kwiZambia njengoko idala ingqesho, ivuselela uphuhliso lwamaphandle kunye nolwakhiwo kwaye inyusa ingeniso yotshintshiselwano lwangaphandle.
Ukongeza, iyinkomo ezinkozo kurhulumente kwaye ikhuthaza ubugcisa basekuhlaleni.
Ngokwengxelo yoMphathi oyiNtloko weSigqeba uStein Liyanda we-ZNTB, ukunqongophala kophuhliso eZambia kuthetha ukuba izilwanyana zasendle zihlala zihlukile kwaye zininzi. Asiphelelanga nje ekudlaleni iinyamakazi kodwa zingaphezu kwama-700 iintlobo zeentaka. Isinye kwisithathu esipheleleyo selizwe sigciniwe njengeepaki zesizwe kunye nolawulo lwezilwanyana (i-Institutional Investor-International Edition. UCanzibe, 2003).
IDavid Livingstone Safari Lodge kunye ne-Spa (Ilungu: Iihotele eziPhambili zeHlabathi; iAha Hotels & Lodges Group)
IDavid Livingstone Safari Lodge & Spa imi kuMlambo iZambezi, ngaphakathi kweMosi-Oa-Tunya Park, ejongene nesiqithi iSiloka, ngasemantla eVictoria Falls nakufutshane nedolophu yaseLivingstone. Ipropathi ibandakanya amagumbi asemgangathweni angama-72 kunye namagumbi aphezulu ama-5 anomoya opholileyo. Igumbi ngalinye linebhalkoni yabucala eneembono ezintle zoMlambo iZambezi. Amagumbi abakhubazekileyo ayafumaneka.
Izizathu ezijikeleze i-Lodge zenza ukuba useto lube luhle kakhulu kwaye iindawo zoluntu zibonakale ziyilelwe njengenxalenye yeseti yomdlalo bhanyabhanya.
I-Lodge ibonelela ngendawo yomnyhadala kwaye liziko leenkomfa kunye nendawo yomtshato.
Indawo yokutyela yaseKala ine-Afro-Arabian fusion cuisine kwaye ivulelekile isidlo sakusasa, isidlo sasemini kunye nesangokuhlwa.
Ihotele inephuli yangaphandle kunye nendawo yokomelela komzimba, indawo yokuzivavanya, kunye nebala legalufa liyafumaneka kufutshane. I-kayaking kunye ne-rafting adventures inokucwangciswa.
Iimeko zendlela yaseZambia zahlukile kwindawo esiya kuyo. Izithuthi zihamba kwicala lasekhohlo lendlela kwaye iimoto kwizangqa zendlela zihamba ngokwewotshi. Akukho semthethweni ukujikela ngasekhohlo kwilambu ebomvu.
Iindlela ezininzi azinamagxa okanye iindledlana zokunyanzela abahambi ngeenyawo kunye nemfuyo ukuba basebenzise iindlela emini nasebusuku. Kukwaphula umthetho kwezithuthi ukutshiza umntu ohamba ngeenyawo xa uqhuba emanzini. I-inshurensi yomntu wesithathu inyanzelekile, kwaye kufuneka ithengwe elizweni. Xa umisiwe, kufuneka ubonise ubungqina bokuthenga.
Iindlela eziphambili zilungiswa kakuhle; nangona kunjalo, iindlela ezininzi eziziisekondari zifuna ukulungiswa. Kucetyiswa izithuthi ezihamba ngamavili amane ngexesha leemvula (ukuphela kuka-Okthobha ukuya phakathi ku-Matshi).
Akukho zinkonzo zonxunguphalo zabaqhubi abonzakeleyo okanye abaxineneyo. Amaxhoba engozi yemoto asemngciphekweni wobusela ngabantu abazenza ngathi baluncedo. Ngelixa iselfowuni icetyiswayo (eneneni iyimfuneko), ezinye iindawo zelizwe azinayo inkonzo yeselfowuni; Nangona kunjalo, ukusebenzisa ifowuni ngaphandle kwekiti engenazandla xa uqhuba akukho semthethweni kwaye ukuba ubanjiwe, uya kuhlawuliswa.
Ukuba umiswe ngamapolisa xa uqhuba kwaye ucelwa ukuba uhlawule isohlwayo, cela irisithi okanye isikhokelo kwisikhululo samapolisa esikufutshane apho unokwenza khona intlawulo. ukuqhuba “Phantsi kwempembelelo?” Abaqhubi bayavavanywa eLusaka's University Teaching Hospital emva koko basiwe enkundleni.
Ukuwela umda-iiNtloko eziPhezulu
Xa iindwendwe zinqumla imida zisuka kwelinye ilizwe laseAfrika ziye kwelinye, kufuneka kulandelwe iinkqubo zikarhulumente. Ukuba ukhatshwa sisikhokelo sabakhenkethi, kusenokwenzeka ukuba ayiphathe ngokwakhe intengiselwano ebandakanya ukuphononongwa kwepaspoti, ii-visa kunye nentlawulo yemali. Eyona ndlela ikhawulezayo yokwenza inkqubo kukulandela imiyalelo eboniswe sisikhokelo. Sukujonga izizathu okanye izizathu. Landela nje izikhokelo.
Kubalulekile ukuba nemali ngemali yalapha ekhaya kunye needola zaseMelika njengoko amanye amagosa olawulo lwemida engayi kuyamkela imali yamanye amazwe kwaye akunakulindeleka ukuba amkele amakhadi etyala okanye okuthenga. Kubonakala ngathi akukho mithetho iqingqiweyo okanye imigaqo ekuweleni umda. Ke, esona siqubulo silungileyo sithi, "Lungiselela okubi uze uthandazele okona kulungileyo."
Zilungiselele kwimigca emide yeelori, iimoto kunye neebhayisekile ezilinde ukuwela umda. Ukuwela umda eZambia kudlula kwisikhephe samanzi. Ibhulorho iyakhiwa kodwa ibikwinqanaba lokuphuhlisa iminyaka emininzi. Kuba isikebhe sokuwela isikhululo indala kakhulu, sinokucotha, kwaye singa jongeka sikhuselekile. Kwakhona, landela isikhokelo somkhokeli wabakhenkethi, kwaye wamkele imiyalelo yabo: hamba xa bekuxelela ukuba uhambe, hlala apho bakuxelela ukuba uhlale khona. Benza imisebenzi yabo iminyaka emininzi kwaye banolwazi malunga neendlela ezisebenzayo ukukhawulezisa inkqubo.
Umonde kunye ne-Snack
Ngamanye amaxesha, ukuba ithamsanqa likwicala lakho kwaye unesikhokelo esihle ngokwenene, ukuhamba usuka kwelinye ilizwe uye kwelinye kuya kuba lula. Nangona kunjalo, kungcono ukuba ulungiselele ngengqondo indlela ende kunye neshushu, emva koko wothuke xa uxinzelelo lwalungento.
Yiba nokutya okulula kunye namanzi. Inkqubo inokukhawuleza kwaye ibe lula, okanye hayi.
Bukela izinto zakho kwaye ugcine iliso lakho kwimoto yakho kunye / okanye kwisikhokelo sakho sokhenketho.
Yenza iphepha lakho lifumaneke (okt, iiPasipoti, iivisa, nemali).
Yiba mnandi uncume. Ubundlobongela, ingqumbo, unxunguphalo- fihla zonke iimvakalelo de iphepha lifakwe isitampu kwaye ungaphandle kolawulo lwepasipoti kunye nokuqhuba kwilizwe oya kulo.
Oko Ukwenza Okulandelayo
Iindwendwe ziyonwabele iZambia zodwa okanye neqela; Nangona kunjalo, ngaphandle kokuba uqhelene kakhulu ne-Afrika, ukhe waphila kwaye wasebenza kulo mmandla, ubunzima benkcubeko bunokwenza uhambo lube ngamava otyhafisayo ukuba awusebenzi ngokukhokelwa ngumqhubi wezobuchwephesha. Isiphakamiso sam kukuba uqhagamshelane noRoss Kennedy e-Afrika i-Albida Tours, yena kunye neqela lakhe baya kunceda ukuhlela izicwangciso zakho nokuphuhlisa uhambo olufanelekileyo.